Polycarbonate Plastic / Ulenze Sheet Izinto zokwakha
Iimpawu zeMveliso Inqanaba lokungena: inqanaba lokungena eliphezulu, elinokufikelela kwi-25% kunye ne-86% ngemibala eyahlukeneyo. Ukuxhathisa kwempembelelo: ubunzulu bempembelelo kwikholamu engenamoya ngamaxesha angama-80 kuneglasi. Ukomelela: Emva kweeyure ezingama-4,000 zokunyusa uvavanyo lokuguga, i-Yi yi-2 kunye ne-LT yi-0.6% Ngenxa yoko, emva kweminyaka eli-10 yokusetyenziswa, amazinga aphezulu okungena kunye namanqanaba asezantsi etyheli anokugcinwa. Ukukhuselwa kwimitha ye-ultraviolet: Izibane zelanga ze-PC ziqwalaselwe kwiindawo ezintathu ezihambelana ...
Uyilo oluhle lweGadi yasekhaya Sebenzisa iPC yeGreenhouse
Iinkonzo zethu 1. Phendula imibuzo yakho kwi-intanethi iiyure ezingama-24 kwelona xesha lifutshane kunokwenzeka 2. Abasebenzi abanamava ukuphendula yonke imibuzo yakho yoyilo oluqhelekileyo 1. Siya kukwazisa ngemilinganiselo ethile kunye nemibala oyifunayo. 2. Sinokuvelisa iibhodi ze-polycarbonate, kwaye sikulungele ukukunika ezinye iingcebiso ngolwazi lwakho.U: Ndingafumana njani isampulu? A: Ngokumalunga neesampulu zasimahla, kufuneka uhlawule ukuhanjiswa kwazo. Q: Yeyiphi imiqathango yentlawulo ongayamkela? A: Singalamkela ukuhanjiswa ngocingo, lett ...
Umgangatho oPhezulu wePhepha eliPhakamileyo lePolycarbonate PC Sheet
Inkonzo yethu yenkonzo yokuthengisa kwangaphambili: 1. Uyilo oluqhelekileyo 2. Uphenyo lwemveliso 3. Nika iisampulu ngaphakathi kweentsuku ezisi-7. Inkonzo yasemva kwentengiso 1. Ixesha lokuhambisa elifutshane 2. Imiyalelo yofakelo 3. Inkonzo yokubonisana iiyure ezingama-24 kunye nokuveliswa kweemveliso ezifanayo kunye neenkqubo. Ukongeza, ukuba kuceliwe, iirekhodi ubuncinci ezintlanu (5) zangaphambili, ezomntu kwaye ngokulinganayo ...
Umgangatho olungileyo wePlastiki yePhepha lePlastiki
Iimpawu zeMveliso ezihlala ixesha elide (ubuncinci iminyaka eli-10) Imveliso inezinto ezizinzileyo kwindalo esingqongileyo.Naphantsi kweemeko ezinzima zokubhencwa kwi-UV, ubushushu obuphezulu kunye nokubanda okungaginyisi mathe, kugcina umbala ozinzileyo. Ukusebenza okuhle kwe-Anti-corrosion Synthetic Resin Tile kunokumelana ne-asidi ye-longterm, i-alkali kunye ne-salt corrosion, njl. ..
Zu Gel Coat Sheet Van Ukumboza
Iphepha le-Gel eliboshwe i-GP luhlobo olutsha lwemveliso ekumgangatho ophezulu ye-eco-friendly, eyenziweyo ngobushushu be-gel idyasi, i-resin eyenziweyo kunye ne-fiberglass. Kwaye isetyenziswa kakhulu ezikumgangatho ophezulu wemoto, ifriji kunye nokuhlanjululwa kwamagumbi elori, unyango, ucoceko lokutya kunye nezinye iiprojekthi. Sinexabiso elifanelekileyo phakathi kwabavelisi bomgangatho ofanayo kunye nomgangatho ophezulu wamaxabiso. Kwaye siyathembisa ukuzaliseka kwenkonzo emva kokuthengisa kuya kuphela emva kokuba wonelisekile. Amandla nokumelana o ...
Amanqaku 1) Umxholo we-fiberglass malunga ne-27% -30%. 2) Amandla okumelana nemozulu kunye nokuzicoca ngokwawo 3) Ukuxhathisa okumthubi 4) okunamandla, okunganyangekiyo kunye nokuguqa okuphantsi 5) ukumelana namaqondo obushushu aphezulu -38 degrees +110 degrees ixesha elide 6) Ukwaluphala okungagungqiyo: F4 ifilimu echaziweyo yongezwa umphezulu kunye nengubo engapheliyo yejel kudala. Iphepha le-fiberglass grp frp sheet. Iimathiriyeli: ifayibha yeglasi eyomeleziweyo yeplastiki, umatshini wokwenza umatshini oqhubekayo wokuThintela ukuHamba ngophahla lwe-FRP ...
I-FRP Bonai Corrugated Fiberglass Sheet Factory GRP oyifunayo
Ingcaciso yeMveliso Iphepha lophahla lwe-fiberglass (i-fiberglass yethayile yeplastiki okanye i-FRP skylight panel) amandla ubunzima ratio. Ngenxa yezi zinto zibalaseleyo ngokungafaniyo ne-PVC okanye ukhuni, ifumana usetyenziso lwayo ngokubanzi kuwo onke amabakala obomi: i-aerospace, oololiwe, iikhemikhali ...
I-FRP GRP yeFiberglass yeDreyina yokuhambisa amanzi
I-slot esembindini yomgama ohlobo lwe-U yokuhambisa umjelo Nge-plug yedreyini, ukuphuma ngokudibeneyo kuyinkqubo epheleleyo yokuhambisa amanzi. Imijelo yokuhambisa amanzi ineenkcukacha ezininzi, inokwenza ngokwemfuno yakho. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo yokuhambisa amanzi kulwakhiwo lukazwelonke, ulwakhiwo loluntu, ezorhwebo, ezemizi-mveliso. Umzekelo: isikhululo seenqwelomoya, izibuko, ipaki, ibala lezemidlalo, iintlobo ezininzi zeendlela, isikwere sokuhambisa amanzi, umjelo wesitalato njalo njalo. Izinto ezikwiphepha lethu lokukhupha amanzi zii-grp frp Solicitud 1. Decoración ...